Madaxwaynaha DDSI Oo Kaga Hadlay Barnaamijka PSNP Xaflad Lagu Daah Furayay 34 Baabuur Oo Lagu Gudoonsiinayay Degmooyinka Uu Kahawlgalo Barnaamijka Badbaadada Iyo Waxsoosaarka Ee(PSNP). - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI Oo Kaga Hadlay Barnaamijka PSNP Xaflad Lagu Daah Furayay 34 Baabuur Oo Lagu Gudoonsiinayay Degmooyinka Uu Kahawlgalo Barnaamijka Badbaadada Iyo Waxsoosaarka Ee(PSNP).
Jigjiga(CN) Axad-03-Aug-2014, Madaxwaynaha DDSI Mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa kahadlay doorka uu ka qaatay dhimista saboolnimada barnaamijka PSNP isagoo aad u soo dhaweeyay baabuurta lagudoonsiinayay degmooyinka uu ka hawlgalo barnaamijku. Madaxwaynaha ayaa sheegay in barnaamijku uu kaalin muhiim ah ka qaatay hawlaha dhimista saboolnimada islamarkaana uu barnaamijku balaadhiyay degmooyinka uu ka hawlagalayo iyo waxqabadkiisa horumarineed.
Madaxwaynaha ayaa shalay ka hadlay munaasibad lagu daah furayay 34 baabuur oo Hardtop ah oo lagu wareejinayay degmooyinka uu ka hawlgalo barnaamijka PSNP. Wasiirka Wasaarada Xoolaha, Beeraha Iyo Horumarinta Reer Miyaga ee DDSI Mudane Cabdirisaaq Cali Baashe ayaa ugu horayntii faahfaahin ka bixiyay munaasabadii iyo qaabka ay u dhacaysay xafladu isagoo kusoo dhaweeyay Madaxwaynaha. Waxaana xaflada kasoo qayb galay gudoomiyaashii gobolada, degmooyinka iyo qaar kamida wasiirada heer deegaan taasoo ka qabsoontay barxada xafiiska Xoolaha, Beeraha iyo Hor.Reer Miyiga ee DDSI.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa kahadlay hawlaha muhiimka ah ee barnaamijku ka qabtay deegaanka guud ahaan mudadii shanta sano ahayd ee barnaamijku ka shaqaynayay deegaanka, kaasoo uu sheegay Madaxwaynuhu in uu door laxaad leh ka qaatay ladagaalanka saboolnimada oo uu barnaamijku wax ka qabtay dhinacyo badan oo ay kamidyihiin beeraha, caafimaadka, waxbarashada, biyaha IWM.
Sidoo kale Madaxwaynuhu waxuu ka hadlay sidii looga faaiidaysan lahaa baabuurtaasi iyo hanaankii loo ilaalin lahaa oo uu sheegay in laga mam-nuucayo wade kasta oo mukhaadaraadka jaadka u saaxiib ah. Wuxuuna sheegay in sida loogu talagay loo isticmaalo gawaadhidan qaaliga ah islamarkaana loo baahanyahay in si taxadar leh loo ilaashado. Madaxwaynuhu wuxuu furayaashii baabuurta ku wareejiyay gudoomiyaashii degmooyinka uu ka hawlagalyay barnaamijku, isagoo aad ugu mahadceliyay dhamaan deeq bixiyaasha ku bahoobay barnaamijka PSNP, Wasaarada Beeraha, Maaliyada heer federaal iyo dhamaanba masuuliyiinta ka hawlagalaya barnaamijkan ee heer federaal iyo heer deegaanba.
Barnaamijka dhimista saboolnimada ee PSNP ayaa sanadkii ugu horeeyay ee 2001 T.I ka hawlagalay 6 demo oo deegaanka ah iyadoo haatan uu barnaamijku hiigsanayo inuu ka hawalgalo dhamaan degmooyinka. Dhinaca kale barnaamijka oo ka hawlgali jiray meelaha aan magaalooyinka ahayn ayaa waxaa sanadka kusoo biiray magaalooyinka (PSNP urban).